ကြီးမားသော မစ်ဂျစ်လန်နစ် တိမ်တိုက် - ဝီကီပီးဒီးယား
05° 23′ 34.5″
ကြီးမားသော မစ်ဂျစ်လန်နစ် တိမ်တိုက်သည် နဂါးငွေ့တန်း ဂလက်ဆီ၏ အရံ ဂလက်ဆီ (satellite galaxy) တစ်ခုဖြစ်သည်။ ယင်းသည် ၅၀ kiloparsecs (အလင်းနှစ် ≈၁၆၀,၀၀၀ ဝန်းကျင်) အကွာအဝေးတွင် တည်ရှိပြီး Sagittarius Dwarf Spheroidal ဂလက်ဆီပြီးလျင် နဂါးငွေ့တန်း ဂလက်ဆီနှင့် ဒုတိယ သို့မဟုတ် တတိယ အနီးဆုံး ဂလက်ဆီဖြစ်သည်။ မြင်နိုင်သောကြယ်များနှင့် နေထုထည်ပေါင်း ၁၀ ဘီလီယံနီးပါးခန့်တို့ကိုအခြေခံ၍ တွက်ချက်ချက်အရ ကြီးမားသော မစ်ဂျစ်လန်နစ် တိမ်တိုက်၏ အချင်းမှာ အလင်းနှစ် ၁၄,၀၀၀ ရှိသည်။ ယင်းသည် နဂါးငွေ့တန်းဂလက်ဆီ၏ ထုထည်ပမာဏ ၁၀၀ ပုံ ၁ ပုံခန့်ရှိပြီး Local Group တွင် အင်ဒရိုမီဒါ ဂလက်ဆီ၊ နဂါးငွေ့တန်းနှင့် ထရိုင်ဂူလယ် ဂယ်လက်ဆီပြီးလျင် လေးခုမြောက် အကြီးဆုံး ဂလက်ဆီဖြစ်သည်။ နောင်နှစ်ပေါင်း ၂.၄ ဘီလီယံနီးပါးခန့်တွင် နဂါးငွေ့တန်း ဂလက်ဆီနှင့် တိုက်မိမည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ၁.၃ ၁.၄ ၁.၅ NASA/IPAC Extragalactic Database။ Results for Large Magellanic Cloud။ 16 December 2008 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။4September 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၂.၀ ၂.၁ Pietrzyński, G (7 March 2013). "An eclipsing-binary distance to the Large Magellanic Cloud accurate to two per cent". Nature 495 (7439): 76–79. doi:10.1038/nature11878. PMID 23467166. Bibcode: 2013Natur.495...76P.
↑ ၃.၀ ၃.၁ ၃.၂ "Magellanic Cloud Archived2May 2015 at the Wayback Machine.". Encyclopædia Britannica. 2009. Encyclopædia Britannica Online. 30 Aug. 2009.
↑ "Astronomical Society of the Pacific Leaflets, The Magellanic Clouds" (1954). Astronomical Society of the Pacific Leaflets7(302). Bibcode: 1954ASPL....7....9B.
↑ "The Hubble Constant" (2010). Annual Review of Astronomy and Astrophysics 48: 673–710. doi:10.1146/annurev-astro-082708-101829. Bibcode: 2010ARA&A..48..673F.
↑ "Anchoring the Universal Distance Scale viaaWesenheit Template" (2010). Journal of the American Association of Variable Star Observers 39 (1): 122. Bibcode: 2011JAVSO..39..122M.
↑ "The aftermath of the Great Collision between our Galaxy and the Large Magellanic Cloud" (in en) (2019-02-21). Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 483 (2): 2185–2196. doi:10.1093/mnras/sty3084. ISSN 0035-8711. Bibcode: 2019MNRAS.483.2185C.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကြီးမားသော_မစ်ဂျစ်လန်နစ်_တိမ်တိုက်&oldid=716254" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၇ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၉:၀၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။